Qiimeynta Musharaxiinta Madaxweynaha | Maanta Online
Home / Faallo / Qiimeynta Musharaxiinta Madaxweynaha
Posted by: admin in Faallo February 6, 2017	Comments Off on Qiimeynta Musharaxiinta Madaxweynaha 1,012 Views
1-Cumar Cabadirashid Cali Sharmaarke Sheekadiisa waxay la mid tahay tii Cabdiweli Cali Gaas uu ku sagootiyey Shiikh Shariif oo aakhirkii isku sharaxay Madaxweynaha Puntland sidaa Darteed soo laga ma yaabo in Cumar Cabdirshiid uu wadadaas maro Madaxweynana uu ka noqdo Puntland.
2-Maxamed Cali Ameeriko dadka qaar ayaa qaba in uu ka mid yahay Siyaasiyiinta qabta Ciilka maadaaama hore looga qaadey Xilkii danjirino ee uu mudada dheer uu hayey loona sheegey in Xilka kale loo magacaabayo taasoo uusan helin, waxaana ka Dareemeysaa Ciilkaas Khudbadiisi uu Baarlamaanka ja jeediyey.
3-Shiikh Shariif Shiikh Axmed Sannadkii 2012 oo si weyn ugu Kalsoonaa in dib loo dooranayo Kursiga ayaa Dadka qaarkood waxay qabaan in sababaha uu isku soo sharaxay Xiligaan tahay uur Ku taalo iyo Xanuun uu ka qaadey Doorkii hore waxaana ka dhandhasan kartaa Hadalada uu ku soo Galey Ololahiisa iyo weliba Khudbadii uu ka horjeediyey Baarlamaanka oo inta badan u ku qaniinayo Xasan Shiikh.
4- Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maadaama Horey looga Ciideeyey hadii aan dib u qooraansado Khudbadihiisa wuxuuu si weyn ugu weeraray Xasan iyadoo qaar ay la yaabeen waxa dhex maraey Xasan iyo Farmaajo.
5-Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay si aad ah isugu dhawaayeen Xasan Shiikh oo uu ka dhigtey la taliye marna uu u magacaabey Safiirka Qaramada Midoobey oo markii dambe uu noqdey Yuusuf Garaad marka Dadka qaar baa la yaaban dagaalkaan halka uu Salka ku hayo iyadoo Khudbadiisa Cabdiraxmaan badneyd Weerar uu ku hayey Xasan Shiikh.
6-Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaa Xaqiiqo ah in uu yahay nin Ciil ku Gaamurey Tiiraanyo badana haysa sidaa darteed Musharaxnimadiisa waxay salka ku haysaa ama uu doonayaa in Xasan dib u soo laaban.
7-Cabduqaadir Cosobe Cali dadka Siyaasada Odrasa ayaa qaba in Cososble uu qabo Ciil Maadaaama Xasan Shiikh uu damcay in uu ka hor istaago Xildhibaanimadiisii waana midaas inta badan waxay Khudbadiisa ahayd Xasan ku Wajahneyd.
8- Jabriil Ibraahim Cabdule Dadka qaar ayaa la yaaban Dagaalka ka dhexeeya Xasan iyo Jabriil halka uu salka uu ku hayo maadaama Doorashadii 2012 Jabriil uu aad ugu Ololeynay Xasan.
10-Cabdulaahi Ciil Mooge markaan Dib u fiirino Khadbadiisii Musharaxnim waxay dadka ku macneeyeen nin Doonaya in uu Boos ka Cariisado Dowlada Soo socota.
11-Bashiir Raage Shiraar Khudbadiisa waxay ahayd mid Dagen kamana muuqan Weerarka Xasan lagu hayey sida Musharaxiinta Kale.
12-Maxamed Maxamuud Culusow ,waxaan Ku Tilmaami karaa Khudbadiisa mid ugu Fiicneyd waayo waxaan akhriyey qoraal u ka diyaariyey waxa la yiraahdo Dowlad wanaaga kuna aadan Ololahisa Musharaxnima oo Hadii aad akhrisid wax badan aad ka faaiideysid sidaa darteed Cidna weera kuma ahayn.
13-Cabdiraxmaan Faroole dadka qaar ayaa qaba in Musharaxnimadiisa ay ku timid Heshiis uu la galey Mid ka mid ah Musharaxiinta oo Hadii uu guuleysto uu noqdo Raiisul Wasaare sidaa darteed Khudbadiisa waxay u badneyd wax qabasho.
15-Xaaj Maxamed Yaasiin Siyaasada kuma Cusuba oo dhowr jeer ayaauu isa soo sharaxay hase yeehee Dadka qaar ayaa si weyn ula dhacay ama u soo dhaweeyey Khudbadiisa maadaaama uu sheegey in uu diinta islamaamka ku hogaaminayo Dalka hadii la doorto.
16-Axmed Maxamed Cabdi waa Siyaasi ka soo jeeda Waqooyiga Soomaaliya hase yeeshee waa Nin Doonaya in uu Boos ka Cariirsado Dowada soo socotada maadaama uu is baheysi la yahay koox Musharaxiina oo isu Magcoowdey Musharaxiinya Isbedel sameynta halka dhinaca kale uu ka soo jeedo Maxamed Cumar Carte.
18- Saciid Ciise Maxamed Sannadii 2012 waxaa uu ka mid ahaa Musharaxiintii Madaxweynaha hase yeeshee Dadka Badankiisa ayaa si weyn ula dhacsanaa Khudbadiisa oo ay sheegeen mid ku qotontey Khibrad ku aadan Dowlad Daahfuran.
20-Maxamed Cabdirisaaq inta badan Bulshada Ma yaqaanaan hase yeehee Hadii aan Dib u milicsano Khubadiisa qof si gaar ah uma weerareyna ma jirto sida inta badan Musharaxiinta oo Weerarkooda u badana Xasan Shiikh waxay ku saleysaneyd sidii Soomaaliya uga baxii lahad Dhibaatada.
21-Cali Xaaji Warsame Muddo ayuu ku soo jirey Siyaasada waxaana si weyn looga yaqaana Maamulka Puntland hase yeeshee Musharaxnimadisa ayey dadka qaar ku tilmaameen mid uu doonayo in ka muuqdo Dowladda soo soo sosocota.
22-Saciid Cabdulaahi Dani kuma Cusba Siyaasada hase yeeshee inta badan Dadka ayaa is weydiinayaa Aqoontiisa hadii aan dib u Qooraasano Khudbadiisa dadka qaar ayaa ku tilmaamey mid uu isku Muujinayo si uu Galaangal ugu yeesho Dowlada soo sosocota.
23- Xasan Shiikh Maxamuud Hadii Dib loo doorto waxaa uu noqonayaa Ninkii ugu Horeeyey oo Somaaliya Laba jeer Madaxweyne ka noqda hase yeehee Hiigsigaas ayaa waxaa ku hor Gudban Caqabado Badan Halku dhigiisa Qabayo Ninkeeda Dhameystira Muran badan bay Keentey.
Isku soo duuboo 23 Musharax inta badan waa kuwa uu Ciil u geeyey Musharaxnimadooda halka kuwa kalena ay Yiihiin Boos Raadshado si ay uga Muuqdaan Dowlada soo socota qaar kale markaad Fiirsid Khudbadahooda waxay ka tahay Dowlad Jaceyl in dalkaan dhibaatada uu ka baxo hadaba la arkii doonaa ninka Madaxweyne ka Noqda Dalka.
Previous: Bandow laba maalin ah oo lagu soo rogay Magaalada Muqdisho
Next: Somalia: The Next Oil Superpower?